Burundi oo ciidamadeeda kala baxaysa Soomaaliya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Burundi oo ciidamadeeda kala baxaysa Soomaaliya
January 17, 2017 admin182
Pierre Nkurunziza Madaxweynaha Burundi ayaa amray in ciidamada milatariga ee ka jooga dalka Soomaaliya si deg-deg ah dib loogu soo celiyo dalkooda, Amarkan ayaa soo baxay kadib markii lagu guul dareystay in la xaliyo khilaaf ka dhex jira Burundi iyo Midowga Yurub ee lacagaha ugu deeqa ciidamada AMISOM.
Ciidamada Burundi ayaan muddo bilooyin ah helin wax mushaar ah, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ma helin wax lacag ah muddo bilo ah, sababo la xiriiro xayiraad Midowga Yurub ay saareen xukuumadda dalkaas, kadib laba sano oo shaqaaqooyin siyaasadeed ah.
Midowga Yurub ayaa ka horyimid markii Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyey dastuurka dalkaas si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweyne oo bishii July dib loo doortay.
Ciidamada Burundi ayaa ku sugan gobolada badan oo dalka ka mid ah, waxaana talaabadan ayaa wiiqi doontaa howlgalka Amisom, waxaan bixitaanka ciidamadan ku soo aadayaa dalka Soomaaliya oo ku jira xilli doorasho.
Daawo Sawiro: Fadhigii maanta ay yeesheen Xildhibaanada Aqalka Sare
Wasiir ka tirsan Maamulka Galmudug oo is casilay
Halkee ku dambeeyey mooshinkii laga keenay heshiiskii Dekeda Berbera?